FAAH-FAAHIN: Seddex Qof oo Somaali ah oo lagu Dhaawacay weerar toogasho oo ka dhacay Masjid ku yaal Magaalada Zurich - iftineducation.com
iftineducation.com – FAAH-FAAHIN: Seddex Qof oo Somaali ah oo lagu Dhaawacay weerar toogasho oo ka dhacay Masjid ku yaal Magaalada Zurich
Seddex Qof oo Somali ah ayaa lagu dhaawacay Masjid ay dad badani ku tukanayeen oo ku yaala magaalada Zurikh ee dalka Switzerland ka dib markii nin hubaysani uu rasaas ood-da kaga qaaday dadkii halkaa ku suganaa oo ay Somalidu ku jiraan.
“Qof aan la aqoonsan ayaa dhowr rasaas riday ka dib-na ka baxsday dhismaha “ ayuu yiri afhayeenka booliska Marco Bisa ,kaasi oo warbaahinta kula hadlay masjidka agtiisa ,,iyadoo booliska ay isku geedeemaan goobta.
Dad-goob-joogayaal ah ayaa ku qiyaasay ninka weerarkan gaystay 30-sano jir ku libisnaa dhar- mad madow , waxaana uu ku baxsaday lug ka dib markii uu weerarka gaystay oo ahayd wax yar ka hor salaad-dii Maqrib.
In yar ka dib toogashada booliska ayaa buundada Gessner ka helay qof mayd ah oo gacanta ku haysta baskoolad ,iyadoo hareeraha goobtana uu wada daadsanaa dhiig badan sida lagu arkay sawirro ay baahisay wakaalad-da wararka ee AFP.
Sawir si dhinac ah loo qaaday ayaa muujinaya in qofka la helay maydkiisa uu wada xirnaa dhar-madow ,iyada oo loo malaynayo in qofkani uu gacantiisa isku dal-dalay ,waxaana agagaarka goobta la weeraray la wareegay ciidamada booliska ee magaalada Zurich.
Ugu danbayn,Lama hubo in Qof-ka maydkiisa la helay uu yahay ruuxii gaystay weerarka ,waxaana booliska uu diiday in uu ka hadlo xiriirka ka dhaxeyn kara weerarkan iyo mid lagu qaaday suuq ku yaala magaalada Berlin ,kaasi oo lagu dilay sagaal qof oo u diyaar- garoobayay ciid-da Kirismiska.
Soomaaliya oo safiir u magacaawday Sweden